Unendodana? Siyakuhalalisela futhi sikukwazisa ukuba uvakashele urologist wesilisa. Phela, izifo zezingane ze-penis kubafana zingafinyelelwa ngesikhathi sokungadingekile kwalokhu.
Omama abancane bayaqaphela ukunakekela abafana babo, ngoba abazi konke ukucabangela. Umyeni angakuchazela okuthile, udokotela uzosusa amaphuzu amakhulu. Into esemqoka - ungayithinti ukwelashwa ngaphandle kokuqokwa! Khumbula ukuthi impilo engokwenyama, yengqondo, yokuzala yendodana yakho incike ekufanelekeni kwezenzo zakho. Futhi lokhu kusebenza kuzo zonke izinkinga ngaphandle kokuhlukile.
NgesiGreki, leli gama lisho ukuthi "amathengi afihlekile," okungukuthi, akhiwe ngaphandle kwe-scrotum - emgodini wesisu nangasese. Ngokuvamile lesi sifo senzeke kubafana abasha ngaphambi kwesikhathi, lapho ama-testicles engenawo isikhathi sokuya lapho kudingeka khona. Isifo esinjalo sína kakhulu - sisongela ukungabi nalutho, ngoba lezi zitho ezikhiqiza i-spermatozoa. Yiphuthuma kudokotela ngezifo zobungane besilisa kubafana.
Zikhona izixazululo ezimbili: ezizimele noma ezisebenzayo. Ekuqaleni, ukusiza ingane, yebo, zama ngaphandle kokuhlinzwa. Umphumela omuhle uphumule i-fitovanny (ukuthi ungayenza kanjani ekhaya, uzotshela udokotela) kanye nezinqubo ezenziwa ngqo ngosazi (isibonelo, ukugcoba imisipha emangalisa, ukuqondisa ama-testicles esiqhingini). Zonke lezi zinyathelo ziyadingeka ukuze kuqinisekiswe ukuthi ama-testicles agcinwe endaweni efanele. I-Karapuzu kakade ngonyaka, kodwa akukho lutho olushintshile? Mhlawumbe kuyadingeka ukuthi usebenze ekuguleni kwezingane ezingeni labafana.
Phakathi nokuthuthukiswa kwe-intrauterine, ngezinye izikhathi kukhona ukwephula ukuphuma kwamanzi phakathi kwamagobolondo wezinthambo zomntwana. Ibizwa ngokuthi i-dropsy, noma i-hydrocele. Izifo azikwazi ukuzalwa kuphela, kodwa futhi zitholakale (kakhulu kancane). Kulaba asebekhulile, lesi sifo sibangela ukuvuvukala, ukuhlukumezeka ezithombeni ze-scrotum.
Okokuqala, kufanele ubeke ucwaningo oluqondile. Kulesi sosayensi yezokwelapha, izifundo ezikhethekile ziyasiza. Indlela esekelwe ekutheni i-transillumination yenyama. Lolu cwaningo lubonisa ukuthi lukhona yini nokuthi ukuqoqwa koketshezi phakathi kwamagundane.
Imiphumela yokuhlola ikhuluma nge-dropsy? Ungesabi! Uma engumuntu ongenakho, khona-ke kukhona ithuba lokuthi uzozixazulula yena ngaphambi konyaka. Into esemqoka lapha ukuqondiswa okuqhubekayo kochwepheshe futhi ... ukunakekela ngokucophelela. Uma ubeka i-diaper, qaphela ukuthi ama-rubber ama-strip awaphili ama-testicles. Ngokugula okutholakele kufanele kuvame ukulwa nosizo lwemithi (ngokusekelwe empilweni yengane, izobhalwa udokotela).
Ukwehliswa kwejwabu, elingavumeli ukuvelela ngokuphelele ikhanda le-penis, libizwa ngokuthi i-physiological phimosis yezifo ze-penis zezingane kubafana. Ngokuvamile, lesi sifo asidingi ukwelashwa okukhethekile. Kwanele ngenkathi ugeza ngokuzenzekelayo ususe ijwabu, ukuze lihlanzwe futhi lenziwe. Kodwa ungadluli! Uma kungenjalo, i-phimosis ye-cicatricial ingase ivele (ukubonakala kwemifantu ekhanda le-penis) futhi kuzomele kusebenze. Kancane kancane, njengoba ingane ikhula, i-foreamen ye-foam isikhumba iyaba mkhulu futhi ikhanda livezwe ngokwengeziwe. Kodwa kwenzeka ukuthi le nqubo kufanele ihambelane. Kungani? Isizathu sinakekelo efanayo! Kunzima kakhulu ukuhlanza indawo phakathi kwejwabu kanye ne-glans penis kahle. Futhi akukho, ngisho nokuhle, kusho ukugeza abantwana abasizi. I-grease iqoqa - i-smegma, ephenduka kancane kancane ibe yizinhlamvu ezimhlophe. Benza kube nzima ukuchama, ukuholela ekutheleleni. Isigqoko sejwabu sikhula, amahlumela (izibonakaliso zokuvuvukala), umntwana uyakhala lapho ehamba ngendlela encane. Ungalindeli ukuthi konke kuzodlula ngokwalo! Ngidinga usizo oluphuthumayo!
Ngethuluzi elikhethekile, udokotela uvula ijwabu, ususa ukufihla futhi aphathe isisombululo se-antiseptic. Bese kugcoba ikhanda nge-ointment anti-ukuvuvukala bese uvala isikhumba. Ukwelapha ekhaya kufanele ubambe ngamanzi okugeza (brew marigold, chamomile).
Ukuvuvukala kwe-foreskin kanye ne-glans ipenis kungabangelwa yi-chimatricial phimosis noma kuthuthukiswe ngokungahambisani nemithetho yokuhlanzeka komuntu siqu, i-urethritis (ukuvuvukala kwe-urethra), i-cystitis (ukuvuvukala kwesikhumba), i-pyelonephritis (ukuvuvukala kwezinso). Lesi sifo sibonakala ngezimpawu eziningi. Kukhona ukuvuvukala, ubomvu, ubusika, ubuhlungu esifubeni. Shesha! Ukutheleleka kusakazeka!
I-probe ekhethekile, i-urologist yezingane ezenza izimo zokuphuma kwe-pus eqoqiwe, ihlanza isisombululo esiphezulu nesisombululo se-disinfectant. Kungenzeka ukuthi ingane izobekwa izidakamizwa zokulwa nama-antibacterial ngendlela yamafutha, ama-gel, okuyinto emva kwesikhathi esithile esizodinga ukuba ihlolwe isikhala esiphezulu. Landela yonke imiyalelo kadokotela. Uzobona, umfana wakho uzomuzwa kangcono futhi uzothola ngokushesha!
Kungani ingane ivame ukuhlupheka ngenxa yokubanda?
Kunokuba ukuboleke ingane: ukuqina kwezingane kanye nesigqi
Isaladi ekhethekile evela kumatamatisi amaningi anemibala
Phatha ubuhlungu emalungeni
Isifo samathumbu emantwaneni amancane
Kungani izinsizwa zikhetha abesifazane abadala kunabo?
Chamomile kusuka amabhodlela epulasitiki
Isobho semifino nge amaqanda ezigwaca
Ungasusa kanjani ukugaya ezindebe zakho?
Ungasiza kanjani othandekayo wakho ukuthola indawo yakhe empilweni?
Ikhekhe lesaladi "I-Herring ngaphansi koboya obubomvu e-jelly"
I-Porridge emanzini ku-multivark
Ukuma kwesisu ngesikhathi sokukhulelwa